Nagu saabsan - THE INDIAN FACE
WAAN KU DHASHAY INAAN XOR AHNAHAY:
In ka badan 13 sano ka hor The Indian FaceWaxaan u nimid warshadaha dharka, tan iyo markaas waxaan u geyn jirnay alaab tayo sare leh ciyaartooyda, tacabiirayaasha iyo dhamaan kuwa doonaya inay raacaan falsafadeena nolosha.Waxaan nahay shirkad ay abuurtay oo xamaasad u leh isboortiga, adrenaline iyo tacabirka .
Waxaan nahay Ruux Xor ah:
Waxaan nahay ruux xor ah taasina waa tayada ugu muhiimsan. Waxaan jecel nahay nolosha waxaanan dooneynaa inaan ka faa'iideysano ilbiriqsi kasta, sidii ay ahayd kii ugu dambeeyay. Waxaan ka carareynaa caadooyinka la dejiyay, ma waafaqno oo waxaan madaxa ugu boodnaa khibrado cusub.
WAXA AAN LAGA AQOONNAY INA AYAY INOO SOCOTAA:
Bilaabida u soo kabashadu waa hiigsi aannaan dooneynin in qofna cadaadiyo, waana sababtaas tan iyo 2007dii waxaan dooneynay inaan macaamiisheena ku xirno aaladaha ugu tayada sareeya si aysan wax u joojin karaan.
WAXAAN AHAY INDHAHA LACAG LA'AAN
Waxaan dareemeynaa sida Hindida, inkasta oo aan korayno oo aan isbeddeleyno, xididdadeennu way sii jirayaan oo na xusuusinayaan meesha aan ka nimid iyo halka aan ku soconno. Waxan oo dhan awgood, waxaan ku guuleysanay inaan suuq geyno agabyada ragga iyo dumarka in ka badan 30 dal oo ku yaal Yurub, Ameerika, Aasiya iyo Badweynta.
MA U BAAHAN TAHAY INAAD SAMEEYSAATO?
SOO SOCO MACLUUMAAD
In kasta oo aan jecel nahay nuxurka iyo xaqiiqda, wali waxaan ku jirnaa casrigii dhijitaalka sidaa darteed haddii aadan rabin inaad noo soo dirto calaamadaha qiiqa, waxaad noogu soo diri kartaa farriin qaabkan ah waxaanan kaaga jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.